गोरखाको धार्चे गाउँपालिकामा स्थानीय भाषाको पाठ्यपुस्तक पढाइ हुने, पाठ्यपुस्तक बिमोचन | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : २९ मंसिर २०७६, आईतवार ०८:२८
गोरखाको धार्चे गाउँपालिकामा स्थानीय स्तरमा बोलिने भाषामा पढाइ हुने भएको छ । उत्तरी गोरखा तमु समाजको सहयोगमा गाउँपालिकाले प्रकाशन गरेको पाठ्यपुस्तकको शनिबार एक समारोहका बीच शिक्षा मन्त्रालय का सहसचिव कृष्ण काप्रीले बिमोचन गरे ।
गाउँ पालिकाभरिका २४ वटा विद्यालयको इसिडी तहका बालबालिकामा पढाइ हुने पाठ्यक्रम तयार गरी पाठ्यपुस्तक छपाइ गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष गुरुङले जानकारी दिए । ‘स्थानीय मातृभाषाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय भाषामा पठनपाठन गर्न लागिएको हो’, अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘पाठ्यक्रम २०७५ सालमा नै तयार गरिएको थियो । तर स्थानीय शिक्षा नीति बनाउन नसकिएकाले पढाइ भएको थिएन ।
अहिले शिक्षा नीति पनि तयार भयो । अब स्थानीय भाषाको पाठ्यपुस्तक पढाइ हुन्छ ।’ सुरुको चरणमा भएकाले सो पाठ्यपुस्तक नेपाली लिपिमा नै लेखिएको छ । अर्को बर्ष स्थानीय खेमा लिपिको पाठ्यपुस्तकमा पढाइ गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए ।
अहिले बिमोचन भएको पाठ्य पुस्तक एकहजार थान प्रकाशन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
सबै विद्यालयमा स्थानीय भाषा पढाउने स्रोत शिक्षक राख्ने गाउँपालिकाले योजना बनाएको छ । ‘हामी भाषा र लिपिको बारेमा प्रशिक्षण दिन गाउँपालिकाभित्रका सबै विद्यालयका स्रोत शिक्षक हरुलाई तालिम दिनेछौं’, अध्यक्ष गुरुङले भने ।
स्थानीय सरकारलाई दिइएको २२ वटा अधिकारमध्य स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी स्थानीय भाषामा पठनपाठन गर्न सकिने ब्यबस्था छ ।
गुरुङ समुदायले बोल्ने भाषा लेख्नका लागि खेमा भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । आफ्नो भाषा तथा लिपि संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न धार्चे गाउँपालिका ले खेमा लिपिमा नै साइनबोर्ड, होर्डिङबोर्ड, लेटरप्याड पनि लेख्ने जनाएको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका दरबन्दी मिलान प्रमुख सहसचिव कृष्ण काप्री, नेपाली काङ्ग्रेस गोरखाका सभापति हरि घले, उत्तरी गोरखा तमु समाजका महासचिव सूर्य गुरुङ, कृषि ज्ञानकेन्द्रकी प्रमुख मनिता थापा, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वविजय शर्मा, वडा नं. ७ का अध्यक्ष सूर्यमान गुरुङलगायतले शुभकामना मन्तव्य ब्यक्त गरेका थिए ।